Ungabanceda njani aba Brewers ngemozulu ubhubhane-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Indlela yokunceda abaBrewers beMozulu yoBhubhane
Ixesha: 2020-07-10 I ngxelo: 33
Masijongane nayo: Ubhubhane we-COVID-19 ubangele ifuthe elikhulu kwezoqoqosho ukuza kuthi ga ngoku kunokuba besilindele. Ishishini lotywala lithatha i-hit, siyayiqonda inkxalabo malunga ne-COVID-19 ingaphezulu kwengqondo kubathengi bethu.
Ngamava okusebenza kweemveliso eziphambili kunye neendawo zokupheka, sibona uxanduva olukhulu ekuxhaseni abenzi bezinto ezincinci nabazimeleyo. Kungenxa yoko le nto iqela elizinikeleyo kwiCoff likhupha indawo entsha yokubiza ixabiso eliphantsi ngeli xesha kwaye linikezela ngenkonzo yokuthengwa kwebhetshi encinci simahla kwisidingo ngasinye.
Ukuthelekisa nokufudumeza umphunga wemveli, entsha ioyile eshushu yokufudumeza ioli yile Ayisiyiyo kuphela indlela ekonga iindleko kodwa kunye nesixhobo sokusebenza esilula. Indawo yokwenziwa kwendalo yenziwe ngokukodwa yi-Coff kwi-2018 kwaye ngoku isungule isizukulwana sesi-3 e-US.
Siyathemba ukuba iintshukumo zethu ziya kuba luncedo, sizakuphehlelela uphando ukujonga iimpembelelo ezinazo kubenzi abancinci base China kunye nokuseta isisombululo emva koko. Clike Apha silandele kuFacebook ukufumana iminyhadala enomdla, okanye unxibelelane nathi ngokudibeneyo aaron@nbcoff.com .
Previous: Inoveli coronavirus ayikwazi ukuyeka uku-odolwa kwabaxhasi
Okulandelayo: Inkqubo yokuvelisa i-odolo eya eJapan